Fibatana fonjamby - Afrika :: Hiady tapakila amin’ny Lalao Olympika ireo atleta malagasy dimy • AoRaha
Fibatana fonjamby – Afrika Hiady tapakila amin’ny Lalao Olympika ireo atleta malagasy dimy
Tsara ny vokatra azon’ ireo mpibata fonjamby ho an’i Madagasikara, tamin’ny fiadiana ny ho tompondakan’ i Afrika, Faritra fahatelo, izay nampiantrano ny fifanina­nana tetsy amin’ny kianja mitafon’Ankorondrano.
Nahazo isa tsara ireo atleta malagasy amin’ny fikatsahana ny tapakila amin’ny Lalao Olympika 2020. Atleta dimy niambozona medaly volamena no tsara toerana amin’ny fahazoana izany tapakila izany: Randa­fiarisoan Rosina, Ravololoniaina Vania, Andriantsitohaina Tojo sy Eric ary Ramiaramanana Ricardo.
Nilaza Rakotoarison Thomas, tale teknikan’ny Federasiona malagasin’ny fibatana fonjamby fa: “tsy ho atleta tokana intsony no hiaro ny voninahi-pirenena amin’ny Lalao Olympika fa ho telo, farafahakeliny. Izy dimy mihitsy no hirariana hiatrika an’izany”.
Mila mandray anjara amin’ireo fifaninanana ampahany fahatelo anefa izy ireo, hoy hatrany ity teknisiana ity, vao ho afaka handray anjara amin’ilay lalao goavana.
Medaly volamena iraika ambin’ny folo sy volafotsy roa no niambozonan’ireo atleta malagasy nandritra an’ity fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, faritra fahatelo natao teto amintsika ity.
Baolina kitra – CAN 2021 :: Misokatra amin’ny rehetra ny fampivondronan’ny Barea